लिम्पियाधुरा नै नेपाली भूमिको सिमाना हो - Ujyaalo Nepal
By ujyaalo	 Last updated Nov 12, 2019 83
अहिले हामीले भनिरहेको समस्या कालापानीको मात्र होइन, लिपुलेकको मात्र होइन, लिम्पियाधुराको समस्या मात्र होइन । समग्र रूपमा सुगौली सन्धिबाट निर्धारित गरिएको जुन सिमाना हो, खासगरी नेपालको पश्चिमोत्तर सिमाना, त्यसलाई निर्धारण गर्ने कुरा हो । सिमानालाई संरक्षण गर्ने कुरा हो । सुगौली सन्धिले महाकाली पूर्वको हाम्रो भूमि भनेको छ ।
त्यही व्यवस्थालाई सबै नेपालीले फेरि एक पटक हेर्नुपर्ने भएको छ । त्यसले स्पष्ट रूपमा महाकाली नदीलाई हाम्रो सिमाना भनेको छ । त्यो सिमानालाई रक्षा गर्ने काममा हाम्रो भूमिका सुरुदेखि हुनुपर्ने थियोे, त्यसमा कमजोरी रह्यो । महाकाली नदीका अनेकन शाखा नदी छन् । नदीको मूल प्रवाहमध्ये कुन चाहिँ मूल प्रवाह हो, कुन शाखा हो ? माथि छाङ्रु पुगेपछि महाकाली नदीका दुई ठूला शाखा छन् । एकातिर लिम्पियाधुरा र अर्को लिपुलेकतिर जान्छ । नदीसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न ‘हाइड्रोलोजी’ (जलवायु विज्ञान)ले अध्ययन गर्छ ।
कहिलेकाहीँ विवाद आउन सक्छ । त्यो अवस्थामा हामीले तीनवटा कुरा हेर्नुपर्छ । कुन चाहिँ नदीको शाखाको प्रवाह लामो छ ? लिम्पियाधुराबाट आएको शाखा तीन÷चार गुणा लामो छ । पानीको बहाव पाँच÷छ गुणा बढी पानी छ । जलाधार क्षेत्र पनि लिम्पियाधुराकै छ । त्यसैले लिम्पियाधुरा नै महाकालीको मूल प्रवाह हो भन्ने स्पष्ट छ । म आफैँ त्यो क्षेत्रको प्रत्यक्ष निरीक्षण गरेर आएको छु । जहाँबाट महाकाली उद्गम भएको छ, त्यसलाई कुटी भनिन्छ । स्थानीय भाषामा कुटियाङ्दी पनि भनिन्छ । त्यसको अर्थ काली नदी हो । त्यही मूल प्रवाह भएकाले लिपुलेकबाट आएको शाखा र अन्य शाखा पनि त्यसैमा मिसिएर महाकाली नदी बनेको छ । लिम्पियाधुराबाट आएको बिन्दु (नदी) नै हाम्रो भूमिको मुख्य सिमाना हो ।
खासमा यो त्रिदेशीय बिन्दु पनि हो । नेपाल, चीन र भारत पनि त्यहीँ जोडिन्छ । त्यो क्षेत्रको भूभाग वास्तवमा ‘नो मेन्सल्यान्ड’ (मानिस बस्ने अनुपयुक्त ठाउँ) हो । धेरै उचाइमा छ, निरन्तर हिउँ पर्छ । त्यसैले मान्छेको बसोबास गाह्रो छ । पहिले त्यहाँ तीनवटा गाउँ थिए – नापी, गुन्जी र गभ्र्याङ । त्यहाँको जनगणना गर्न २०१८ सालमा पत्रकार भैरव रिसाल आफैँ जानुभएको थियो । उहाँ अझै जीवित हुनुहुन्छ । त्यो नेपाली भूमि हो । त्यसलाई अहिले भारतले कब्जा गरेको छ । लिपुलेकभन्दा पनि वारि आएर भारतीय सेनाको क्याम्प छ । त्यो क्याम्पदेखि दक्षिणतिर सानो पानीको धारो छ । त्यही धारोलाई महाकालीको मूल हो भनेर भारतले दाबी गर्छ । त्यो नक्कली हो, महाकालीको मूल होइन ।
२०५०र५१ मा संसद् बैठकमा यस विषयमा गम्भीर रूपमा कुरा उठेको थियो । पहिला दमननाथ ढुङ्गाना र पछाडि रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा समिति गठन गरेर निरीक्षण गरिएको थियो । म स्वयं पनि निरीक्षणमा गएको थिएँ । हामी त्यो भूमि देखेर अचम्मित भयौँ । धेरै अघिदेखि हाम्रो भूभाग भारतीय कब्जामा परेको रहेछ । हामीले संसद्मा कुरा उठायौँ तर त्यतिबेलाको सरकारले संसद्को कुरालाई पनि गम्भीरताकासाथ लिएन । त्यसैले यो समस्या कायम रहिरह्यो ।
अहिले आएर भारतले नयाँ नक्सा प्रकाशित गरेपछि लिम्पियाधुरा पूर्व र लिपुलेकबाट आएको नदीको शाखालाई समेत अतिक्रमण गरिएको छ । यो गलत छ । टिङ्कर भञ्ज्याङलाई समेटेर भारतीय नक्सा बनेको छ । यो अत्यन्त दुःखद् र आपत्तिजनक कुरा हो । यसले हाम्रो देशमा विरोधको तरङ्ग पैदा गरेको छ । यो स्वाभाविक हो । यस विषयमा विभिन्न चरणमा छलफल र परामर्श भइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिबार मात्रै सर्वदलीय छलफल राख्नुभयो । त्यसमा प्रतिपक्ष, सत्तापक्ष, दलका नेता, विशेषज्ञले समेत एउटै आवाज निकाल्नुभयो, नेपालको सिमाना लिम्पियाधुरादेखिकै हो । भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको विषयमा सबैको एकमत आयो । सुगौली सन्धिले निर्धारण गरेको सिमानालाई रक्षा गर्ने यो अहम् सवाल हो । यसको समाधान गर्नुपर्छ ।
नेपालले आफ्नो नक्सा प्रकाशित गर्नसक्छ । हामीले सुगौली सन्धिलाई आधार बनाएर नक्सा प्रकाशित गर्न सक्छौँ । सुगौली सन्धिले दिएको जुन भूमि छ, त्यसमा हामी टेक्न सक्छौँ । त्यसअनुसार जाँदा विवाद निरुपण पनि हुन्छ तर अहिले एउटै भूमि एकातिर भारतीय नक्सामा देखिने र अर्कोतिर नेपाली नक्सामा देखिँदा विवाद हुनसक्छ ।
लिम्पियाधुरा नै नेपाली भूमिको सिमाना हो भन्नेमा कुनै विवादै हुन सक्दैन । त्यसमा थुप्रै प्रमाण छन् । ऐतिहासिक सम्झौता, सन्धिका प्रमाण, जनजीवनका प्रमाण, मान्छेले तिरो तिरेका प्रमाण, जनगणनाका प्रमाण हामीसँग छ । त्यो सङ्कलन गरिरहेका छौँ । तत्कालीन नेकपा (एमाले)ले २०४६ सालपछिको संसद्मा यो विषय गम्भीरतापूर्वक उठायो । समितिमा कुरा उठायौँ ।
नापी विभाग, परराष्ट्र मन्त्रालयमा गएर अनेक ढड्डा पल्टाएर सङ्कलन गरेका थियौँ प्रमाण । अहिले विज्ञ बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, रतन भण्डारीसँग पनि यी प्रमाण छन् । भण्डारीले त राम्रो पुस्तक नै प्रकाशित गर्नुभएको छ । त्यसमा पनि दस्तावेज सङ्कलित छन् । विशेषज्ञहरू पनि अहिले सक्रिय हुनुहुन्छ । हामीसँग बलिया प्रमाणहरू छन् । मुलुकले अब पहलकदमी गरेर समस्यालाई समाधान गर्नुपर्छ । ढिलो भए पनि यो महìवपूर्ण ढङ्गले उठेको छ । राष्ट्र एकताबद्ध र एक ढिक्का भएर पहल गर्नुपर्छ ।
यसको मिति किटान गर्न गाह्रो छ तर जतिबेला भारत स्वतन्त्र भयो, त्यसपछि हाम्रो देशको उत्तरतर्फ नयाँ घटना भए । चीन पनि स्वतन्त्र भयो । चीनले तिब्बतमा पनि जनमुक्ति सेनालाई विस्तार ग¥यो । कम्युनिस्ट विस्तार हुने भूतबाट तर्सेर नेपाल भारत सहमति गरी १९५२ मा पश्चिमोत्तर भूभागमा भारतीय १८ वटा चेकपोष्ट राखियो । यो हाम्रो अखण्डतामाथिको ठूलो ब्लन्डर थियो । त्यहीबेला चौकी राखिएको अनुमान छ । चीन र भारतबीच युद्ध भएको थियो त्यहीबेला । त्यो ठाउँ सामरिक महìवको भूभाग हो ।
त्यहाँ मानिस बस्न नसक्ने भूभाग भएकाले हामीलाई थाहा भएन । मानसरोवर जाने बाटो पनि त्यही हो । त्यो क्षेत्रको सबैभन्दा अग्लो भूभाग टिङ्कर भञ्ज्याङ छ । त्यो भूभाग कब्जा गर्ने नियतसाथ भारतीय सेना त्यहाँ लगेर राखिएको अनुमान गर्न सकिन्छ । दुवै देशको दस्तावेज अध्ययन गरेर यसको निरुपण गर्नुुपर्छ । त्यतिबेला मातृकाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएका बेलादेखिको सम्झौताको कागजात हेर्नुपर्छ । त्यसबाट केही कुरा थाहा होला ।
हामीसँग सीमा समस्या मात्र छैन, १९५० को सन्धि पुनरावलोकनको विषय पनि छ । समानताका आधारमा नयाँ सन्धि गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहेको छ । पहिलो पटक तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले १९५० को सन्धिबारे नयाँ ढङ्गले पुनरावलोकन गर्ने कुरा उठाउनुभएको थियो । यो मामिलामा दुवै देशका प्रधानमन्त्री सहमत पनि थिए ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिवहरूले गृहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने समझदारी पनि बन्यो तर त्यसपछिका सरकारले त्यो कुरा उठाउन सकेनन् । विषय थाँती बस्यो । पछिल्लो समय इपीजी गठन ग¥यौँ । प्रवुद्ध समूह गठन भएर लामो परामर्श र छलफल ग¥यो । प्रतिवेदन पनि तयार गरेको छ । लिम्पियाधुरा र लिपुलेकको विषय पनि त्यसमा समेटिएको मैले बुझेको छु । तर, अहिलेसम्म भारत सरकारले प्रतिवेदन बुझेको छैन । नेपाल जहिले पनि प्रतिवेदन बुझ्न तयार छ तर मलाई आशा छ, कुनै न कुनै दिन भारतले त्यो प्रतिवेदन बुझ्छ । यो प्रतिवेदनले पनि नेपाल र भारतको समस्या समाधान गर्नमा आधार प्रदान गर्छ । यो समस्या समाधान गर्नमा पनि सहयोग गर्छ भन्ने मलाई विश्वास छ ।
निश्चय पनि । नेपाल एउटा महìवपूर्ण उचाइमा पुगेको छ । राजनीतिक विवाद सल्टाएर दस वर्ष लगाएर नयाँ संविधान निर्माण गरेका छौँ । यसले नेपालको राजनीतिक समस्यालाई आमूल रूपमा समाधान गरेको छ । नेपाल अहिले संवैधानिक स्थिरतामा गएको छ । विकास निर्माण र समृद्धिको युगमा पदार्पण गरेको छ ।
दोस्रो, नेपालमा यतिबेला शक्तिशाली सरकार छ । तेस्रो, नेपालमा पहिलोपटक सिमानाका विषयमा राष्ट्रिय सहमति भएको छ । ठोस रूपमा प्रकट भएको छ । यो हाम्रो ठूलो शक्ति र सम्पत्ति हो । एकताको बिन्दुमा हामी छौँ । ठीक त्यसरी नै भारतमा पनि शक्तिशाली सरकार छ । बहुमतको सरकार छ । त्यसले पनि आवश्यक परे संसद्बाट अनुमोदन गराउनसक्ने तागत छ ।
दुवै देशका सरकार अनुकूलतामा छन् । दुई देशबीच राम्रो सम्बन्ध पनि कायम भएको छ । यो नक्साका कारण दुई देशबीचको सम्बन्ध बिग्रिहाल्ने होइन । समस्या सल्टाउने यो राम्रो अवसर पनि हो । दुवै देशले यसलाई त्यसरी बुझ्नुपर्छ । यो अवसरलाई सरकारले चिन्नुपर्छ जनताले मात्र
हामी अलि बढी प्रतिक्रियात्मक रहेकोमा सच्चाई छ । विगतमा हाम्रो देशको सत्तापक्षले भूमिका निर्वाह नगरेकाले यो अवस्था आयो । जनताले, प्रतिपक्षीले पहलकदमी गरेको कुरामा यसअघिको सरकारले गम्भीरतापूर्वक चासो लिएको भए यो विवाद अहिले आउने थिएन । अहिले यो विषयमा राष्ट्रिय सहमति बन्ने देखिएको छ । यसअघि यस्तो सुदृढ अवस्था थिएन ।
पूर्वनेकपा एमालेले कुरा उठाउँदा अरू दल र सरकारले यसको सुनुवाइ गरेका थिएनन् । अहिले यो विषयमा सरकारले पहल गरेको छ । प्रतिपक्षीदल, अन्य दल र सबै नेपाली जनता एक ठाउँमा छौँ । त्यसैले पनि समस्या समाधान गर्नमा हामी बलियो भएका छौँ । हामी ठीक ठाउँमा आइपुगेका छौँ । यस्तो परिस्थिति यसअघि बन्नसकेको थिएन । विविध कारण थिए । त्यतातिर अहिले नजाउँ । अब कार्यान्वयन गर्नेमा सरकारले नेतृत्व गरेर दृढ भएर, दूरगामी ढङ्गले अघि बढ्न सक्नुपर्छ । नेपालको समस्या पक्कै समाधान हुन्छ ।
साभार गाेरखापत्रबाट ।
प्रकाशित: २६ कार्तिक २०७६, मंगलवार ०८:२१